Yeungnam University - Higher Education ná Mba Ọzọ na South Korea
Yeungnam University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1967
Students (ihe ruru.) : 40000
Echefukwala atụle Yeungnam University
Idebanye aha na Yeungnam University
The Yeungnam University na mmụọ nke Korean ndị mmadụ.
“Lee, ebe a bụ ochie n'ala nke Silla Dynasty ebe mmụọ nke mba ndụ.”
Dị ka e kwuru na anyị mahadum ukwe, Yeungnam University bụ ebe ndụ na-permeated
site na vibrant spirit of Korea.
Ebe ọ bụ na ntọala ya siri na 1947, Yeungnam University so ukwuu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe,
democratization na ọganihu nke Korea amị karịa 190,000 magburu onwe Alumni dabeere
na izi na nkà ihe ọmụma nke 'na mba na mmụta’ na 'ị maliteghachi mba'.
Na ndabere nke anyị sara ahụmahụ na ike akwakọba ihe ikpeazụ 60 afọ,
anyị na-na-na-agbalịsi ike ka mma n'ọdịnihu izute atụ anya nke ọ bụla ọgbọ ọhụrụ.
A University maka mba, na Yeungnam University maka ụwa
Ruo ugbu a, Yeungnam University e akpọ òkè dị oké mkpa na ọzụzụ nchịkwa mmadụ na Korea.
Anyị ga-eme ka a 'University maka mba’ a 'University maka ụwa’ site na-arụ ọrụ ọnụ na gị ugbu a
na n'ime-eme n'ọdịnihu.
“Amamihe na nke na-eto eto na ndị mmụọ, ike na-eto eto ume, na-creators nke
ọhụrụ akụkọ ihe mere eme maka mba na mmadụ niile. ah, Yeungnam University na-eto eto na ya motherland.
ah, iyi nke ikpe ziri ezi na ísìsì nke mmụta.”
Anyị ndị ogologo echefughị ​​kasị mkpa anyị ozi na isi iyi nke ihe anyị amata na. Yeungnam University amalite na-echetara anyị na mba nke okobot spirit nke mbụ Korea President, Mr. Park Chung-ne, 'Mepụta ọhụrụ akụkọ ihe mere eme na ịtụte mba dabeere na ịhụ mba n'anya spirit'.
ugbu a, anyị ga-akpọ a na-eduga ọrụ ike bara uru na ihe ọmụma maka anyị onwe anyị, anyị obodo, mba anyị na ụwa anyị site ghọtara nke a ozi na njirimara nke Yeungnam University.
The Yeungnam University na a siri ike isi na esịtidem isi amaka
University ga-etinye uche ya na-ewu esịtidem isi amaka kama mpụga mma na ihapu otutu okwu. Yeungnam ga-ejupụta ka a na-akwanyere ùgwù onwe mahadum na a ebe nke agụmakwụkwọ iche ghọtara site ma na mpaghara obodo na ụwa. Iji mezuo nke a, Yeungnam University ga-re-ike ntọala ya. Anyị ga-ike a mahadum ebe professors agbalịsi ihe nke ọma na-akụziri na nnyocha, ụmụ akwụkwọ na-eme ihe nke ọma na ọmụmụ ha na ọrụ na mahadum mkpara na ihe nke ọma na ndokwa nke ndutịm ọrụ.
A University obodo na-akpụ akpụ ọnụ, “Go YU, gaa Ọnụ”
Excel, University ga-elekwasị anya na-arụ ọrụ ike na ndị ọzọ ịdị uchu. Anyị nwere ike adịghị ofufe na-enweghị na-agba ọsọ na zuru ọsọ. Anyị maara nke ọma na ọhụụ na ike nke na-efe efe ịnyịnya (Chunma) na-na anyị.
A University eke nrọ, futures na obi ụtọ
Ịmụta na-achọ eziokwu na-eme ka mma nke ndị mmadụ, ọha mmadụ, mba na, n'ikpeazụ, ụwa. Yeungnam University ga-anọgide na-azụlite ndị a ụkpụrụ na-eme dị ka a ebe ike anyị na nrọ, anyị ga-eme n'ọdịnihu na anyị obi ụtọ n'ụwa.
College of Political Science na Public Administration
College of Business na Economics
College of Life na Applied Sciences
College of Human Ọmụmụ & Kinesiology
Yeungnam University e hiwere na 1967 site na mmakọ nke Daegu College na Chunggu College nke e hiwere na 1947 na 1950 karị. Mr. Lee, Dong Nyoung eguzobe dị ka ndị mbụ Chairperson nke Board of Trustees. N'otu afọ Yeungnam University mma dị ka na-amalite na 6 Colleges site Ministry of Education: College of Liberal Arts, College of Engineering, College of Iwu na Political Science, College of Commerce na Economics, College of Pharmacy, na Evening Programs, na 35 Undergraduate ngalaba na 12 gụsịrị akwụkwọ ngalaba. na 1968 January 1, Dr. shin, Ki inu eguzobe dị ka ndị mbụ President nke University na na 1969 ọ malitere na-ewu nke Main Campus na Gyeongsan.
Ná mmalite afọ ndị 1970, na Ukpep School of Management na Ukpep Ngalaba nke Korean Language na Literature, iwu, na Economics e Emesia Main Administration itieutom, College of Liberal Arts, College of Law & Political Science na College of Commerce na Economics a kpọgara si Daegu campus. N'oge ufọt ufọt 1970 na 21-akụkọ isi n'ọbá akwụkwọ-yana-ngalaba ụlọ ọrụ ụlọ na isi ụlọ nlekọta ọrụ na-emezu. N'oge n'afo 1980, Yeungnam University ọgwụ, Foreign Language Institute na University Museum meghere.
na 1996, Yeungnam University mma dị ka ihe magburu onwe University na Undergraduate na Ukpep Schools, na kwa ka “Best University” na ubi nke azụmahịa na International Trade, site na Korean University Education Committee. na 1997, Yeungnam University a họọrọ dị a “Government-Home Program maka Science Education” na mpaghara nke isi sayensị na laabu mmụta na họọrọ dị ka ndị elekọta mahadum maka nlereanya Technopark Project. Ịgbaso afọ Yeungnam University a họọrọ dị a elekọta University dị na Machinery ubi na dị ka ihe Ịga University dị na Ozi Technology ubi maka usoro ihe omume nke ịzụ obodo mahadum na Brain Korea Project nakwa dị ka mahadum họrọ site Ministry of Science and Technology ka Research Ozi Center maka Textiles na n'uwe Science.
N'afọ 2000, Yeungnam University guzobere gụsịrị akwụkwọ ngalaba nke Architectural Design, multimedia Communications, Bio-technology na gụsịrị akwụkwọ ngalaba nke Sino-Korean na Textile Engineering na Doctor ogo. na 2001 University gbanwere School ofCommerce na Economics na Schools of Finance na Business na School of Finance na Economics na School of InternationalEconomics na Business. na 2003 na Ukpep School of Clinical Pharmacy mma, malite na nke gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nke ClinicalPharmacy. The oruru nke Ukpep School of Sports Science mma, malite na nke gụsịrị akwụkwọ na ngalaba nke Sports Science.
Kwa afọ ọtụtụ International ụmụ akwụkwọ iso na Yeungnam University maka ha Masters ma ọ bụ Ph.D. ogo gaba na ha nnyocha ọrụ. Ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ bụ site China, Uzbekistan, Indonesia, Bangladesh, India, Nepal, Bulgaria, Egypt, Malaysia, Pakistan, Mongolia, Vietnam,Poland, Japan, Peru, Senegal na ndị ọzọ na mba dị iche iche.
Yeungnam University ugbu a nwere agụmakwụkwọ nkwekọrịta dị iche iche Universities gburugburu ụwa dị ka, University of Montana, Old nāchi University, University of Michigan, State University nke New York na Albany, Iowa State University of United States, University of Alberta of Canada, University of Upper Alsace (ebe ọ bụ na 1999), Novosibirsk State University, Novosibirsk State Nka na ụzụ University nke Russia, Fukui University na Shinshu University of Japan na ndị ọzọ na ọtụtụ mahadum nke Uzbekistan na China ka Nanjing University, Nankai Universityand Lingnan University, Hong Kong.
na 2010 Yeungnam University họrọ otu n'ime n'elu 10 Asian International Universities maka mgbanwe na zuru ụwa ọnụ agụmakwụkwọ nke narị afọ iri ọhụrụ site Asian mmekorita akụkọ.
Ị chọrọ atụle Yeungnam University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Jikọọ na-atụle nke Yeungnam University.